Manao ahoana ny Yorkshire Terrier | Alika Manerantany
Manahoana ny Yorkshire Terrier
Monica Sanchez | | Taranaky ny alika
Ny Yorkshire Terrier dia karazany alika kely, hany ka mifanaraka tsy misy olana amin'ny fiainana ao amin'ny trano fisaka na trano iray. Ny toetran'izy ireo falifaly sy tony dia mahatonga ireo biby volom-biby ireo ho mahafinaritra, izay ahafahanao mankafy ny andro tsy mbola nisy toy izany.
Discover manao ahoana ny Yorkshire Terrier, alika kely mahafatifaty izay handresy haingana ny fon'ny fianakaviana iray manontolo.
1 Toetra mampiavaka ny Terrain Yorkshire
2 Fihetsika sy toetra
Toetra mampiavaka ny Terrain Yorkshire
Ny protagonista kelinay dia alika izay milanja latsaky ny 3,200kg. Ny vatany dia arovan'ny palitao lava volo sy volondavenona. Ny sofina dia tazonina mahitsy, telozoro ny endrika ary lehibe. Misaraka ny maso, ary volontsôkôlà. Somary lava ny elatra.
Ny vatany, na dia toa marefo aza izy io, dia mahatohitra kokoa noho ny fisehoany. Ny tongony dia matanjaka tokoa, natao hihazakazahana, ka Tsy afaka alaim-panahy hitondra azy eo an-tsandrintsika foana isika, raha tsy izany dia atahorantsika tsy hanana fitondrantena tsy mendrika izy noho ny tsy fisian'ny fanatanjahan-tena.
Fihetsika sy toetra
Ny Yorkshire Terrier dia volom-borona toetra tony sy tia fiaraha-monina Ho an'ny natiora. Mifandray tsara amin'ny biby hafa izy, anisan'izany ny olona. Tena ankafizinao ny fiarahan'ny olon-tianao, ka mety hiankina amin'ny olona manokana ianao. Izany koa tena marani-tsaina, ary tia mianatra zava-baovao.
Ny zavatra tokana hotadidina dia ny, noho ny toetrany, ankizy na alika lehibe kokoa mety handratra anao tsy nahy, noho izany dia zava-dehibe ny tsy hamelantsika azy ireo samirery. Fa raha tsy izany, ny fananana volom-borona an'io ao an-trano dia fanapahan-kevitra tsara 😉.
Ahoana ny hevitrao momba an'io karazany io? Ilay biby tadiavinao mianakavy ve?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Taranaky ny alika » Manahoana ny Yorkshire Terrier
Ahoana no fiasan'ny spa alika?